Home News Ciidamada kenya oo xiray Gudoomiye Degmo iyo xiisad xoogan oo ka dhalatay
Ciidamada kenya oo xiray Gudoomiye Degmo iyo xiisad xoogan oo ka dhalatay
Ciidanka dalka Kenya ayaa xabsiga dhigay Gudoomiyaha degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo Ibraahim Guuleed iyo Kornel Warfaa oo ka mid ahaa Saraakiisha Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan gobolka Gedo.
Xariga ayaa yimid ka dib markii lagu wargaliyay in ay howlo shaqo ay u taggaan Magaalada Nairobi ee Caasimadda dalka kenya, waxaana la sheegay in la xiran xilli ay ku sugnaayeen Magaalada Mandera oo ku taalla Xadka gobolka Waqooyi Bari iyo waliba gobolka Gedo.
Waxaa uu sheegay in Mas’uuliyiin loola dhaqmay si xun, islamarkaana hadda ay ku jiraan xabsi walina aysan Caddeyn sababta loo xiray.
Previous articleCabdulqaadir Shariif Sheekhuna:- oo digniin u diray Shacabka Magaalada Baydhabo!!
Next articleDoorashada K/galbeed oo lagu baaqay in dib loo dhigo!!
Xaflada caleemasaarka Madaxweyne Deni oo lagu casuumay mucaaradkii ugu badnaa!!